नर्सले नै पाइनन काठमाडौंमा उपचार, अस्पतालबाट रुदै निस्किन ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नर्सले नै पाइनन काठमाडौंमा उपचार, अस्पतालबाट रुदै निस्किन !
काठमान्डौ , शनिबार दिउँसो करिब २ बजेको हुँदो हो । एउटी नर्स क’टकटी पेट दुख्यो। दु’खाइ कम नभएपछि आइतबार बिहान थापाथलीस्थित प’रोपकार प्र’सूति तथा स्त्री’रोग अस्पताल पुगिन्। उनले आ’कस्मिक कक्षको टिकट का’टिन् ।प्’रसूतिकी नर्सले उनको स’मस्या बुझिन् र ज्वरो जाँ’च गर्नेलगायतका काम गरिन्। कुरा गर्दै जाँदा ती नर्स उनको साथीकी साथी रहिछिन्। यसरी सम्बन्ध जोडिँदा उनले ती बि’रामी नर्सलाई डाक्टरको कार्यकक्षमा लगिन्। तर, त्यहाँ डाक्टर अरु बि’रामी जाँचिरहेका थिए।
उनी बाहिर निस्केर लाइनमा बसिन्। एक/दुई हुँदै सबै बि’रामीलाई बोलाएर जाँ’च गरियो। तर, उनलाई कसैले बोलाएन। ग’र्भमा अढाइ महिनाको बच्चा रहेको र अत्यधिक र’क्तश्राव भइरहेकाले उनको पेट स’म्हालिन नै नसक्ने गरी दु’खिरहेको थियो। सबैलाई बोलाउँदा पनि आफूलाई कसैले नबोलाएको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘मैले अर्की नर्सलाई मलाई किन भित्र नबोलाएको भनेर सोधें? उहाँले के हो तपाईको स’मस्या भन्नुभयो। मैले आफ्नोबारे बताएपछि उहाँले भित्र जानुहोस् भन्नुभयो।’ भित्र गएपछि एकजना स्टाफले उनलाई बेडमा बस्न आ’ग्रह गरे।
त्यहाँ रहेका नर्सहरूले डाक्टरले बोलाए। तर, डाक्टर आफ्नो कार्यकक्षबाहिर थिए। बि’रामीलाई डाक्टरले बाहिरै बोलाए। चिनेको साथीले भनेकाले डाक्टरले बाहिरै राम्रोसँग जाँ’च्नु हुने भएछ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनी उपचार पाउने आ’समा खुसी हुँदै डाक्टर नजिकै गइन्। तर उनलाई उपचार गर्नु त कता हो कता ती डाक्टरले ‘भित्र मेरो कार्यकक्षमा किन गएको’ भन्दै उनलाई ह’प्काउन थाले। त्यसरी ह’प्काउनुको कारण थियो उनी टेकुबाट आउनु। शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय रहेको नर्स भएको थाहा पाएपछि उनले ख’प्की खानुपरेको थियो।
डाक्टरको ख’प्की खा’इरहँदा पनि उनले आफूलाई नि’कै गा’ह्रो भइरहेको बताइन्। भनिन्, ‘डाक्टरसाब मलाई सन्चो नभएकाले एक हप्ता यता बि’दामा छु। अनि मसँग कोरोना नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट पनि छ। तपाई स’शंकित हुनुपर्दैन। ढु’क्कसँग उपचार गर्दा हुन्छ।’ तर, उनको वि’लाप र पी’डाले डाक्टरको क’ठोर मन प’ग्लिन सकेन। डाक्टरले क’ठोर मु’टु लिएर नर्सलाई झ’पारिरहे। उनले यसो पनि भनिन्, ‘हो म टेकु अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा काम गर्छु। तर, बि’रामीको सम्पर्कमा हामी जतिबेला पनि पुग्दैनौं।
बि’रामीलाई छुट्टै राखेर सिसी क्यामरामार्फत नि’गरानी गर्छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अ’पनाउनु भनेको नि’र्देशन पा’लना गरेर उपचारमा सं’लग्न हुन्छौं। आ’कस्मिक पर्दा मात्र बि’रामीलाई हेर्न जान्छौं। जुन कुरा तपाई जस्तो डाक्टरलाई सु’झाइ रहनु नपर्ला।’ तर, डाक्टरलाई नर्सको त्यस्तो प्र’ष्टीकरणले ह’ल्लाउन सकेन। एक हप्ता बि’दामा बसेको र त्यसको एक हप्ताअगाडिको पिसिआर परीक्षण गरेको रिपोर्ट देखाउँदा पनि बि’रामी नर्सको कुराबारे सु’नुवाई भएन। एक नर्स डाक्टरकै अगाडि बि’ताप गरिरहिन्। छ’ट्पटाइ रहिन् ।
तर, उनको उपचार हुँदैन ।उनको आँखाबाट आँसु झरिरहे। गाला हुँदै बहेका आँसु सुकेर सि’र्का बने। केही थोपा आँसुले सल भि’जाए। केही थोपा भूइँमा खसेर बाफ बने। तर, डाक्टरको मन प’गाल्न सकेनन्। ती नर्सले जति अ’लाप गर्दा पनि डाक्टरले टेर्दै टे’रेनन्। अनि उनी क’ड्किइनँ। भनिन् ‘तपाई बि’रामीको उपचार किन गर्नु हुन्न?’ नि’र्दयी डाक्टरले ‘हाम्रो अस्पतालको प्रो’टोकल फरक रहेको’ भन्दै मोटो जवाफ फर्काए। बि’रामीको उपचार नै गर्न नमिल्ने अस्पतालको कस्तो फरक प्रो’टोकल रहेछ? स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेकी नर्स आफैं त्यस्तो गै’रजिम्मेवार उत्तर सुन्दा छक्क परिन्।
उनलाई अस्पतालमा जाँदा बि’रामीको उपचार नगर्नु भन्ने सं’विधानको कुनै पनि धा’रामा नलेखिएकाले यो कस्तो प्रो’टोकल रहेछ भनेर अचम्म लाग्यो। उनले त्यसरी क’ड्किएपछि टेकु अस्पतालमा कार्यरत भएको हुँदा उपचार गर्न मिल्दैन भनेर ठा’डै जवाफ दिए।त्यसपछि तपाईले स्वास्थ्यकर्मीलाई यस्तो व्य’वहार गर्नुहुन्छ भने अन्य बि’रामीलाई कस्तो व्य’वहार गर्नुहोला? भन्दै उनी पनि थ’प क’डा बनिन्। उनले समबन्धित नि’कायमा उ’जुरी दिनेसम्म बताइन्। तर, ती डाक्टरले ‘जसलाई सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्’ भन्दै उल्टै थ’र्काए।
त्यसपछि उनी नर्सिङ नि’र्देशकको कार्यकक्षमा गइन्। त्यहाँ कोही नहुँदा उपचार नै नपाएर दु’खिरहेको पेट बोकेर उनी रुँदै अस्पतालबाट बाहिरिन्। ‘डाक्टरको त्यस्तो व्य’वहारले आफू स्वास्थ्यकर्मी हुँ भनेर देखाउन ला’ज लाग्यो। का’र्ड झोलामा हालेर हिँडे ।कमसेकम स्वास्थ्यकर्मीले बि’रामीको बारेमा त केही सोचेर उपचार दिनुपर्ने हो। तर, त्यो हुन सकेन। म कोरोना संक्रमित नै हुन्थे भने पनि चिकित्सकले सु’रक्षा प्र’बन्ध मि’लाएर उपचार गर्नुपर्ने हो।’ साथमा उनकै नर्स साथी पनि यो दृश्यको प्र’त्यक्षदर्शी थिइन् ।जो उनलाई लगेर प्र’सूति गृ’ह पुगेकी थिइन्।
र’गत ब’गेर ग’लेको थियो उनको शरीर। त्यसपछि उनी उपचारका लागि पाटन अस्पताल पुगिन्। यो घ’टनाले उपचार नै नपाउने त्रा’स भएपछि पाटनमा उनले आफ्नो परिचय लुकाइन्। र, उपचार पाइन्। एक स्वास्थ्यकर्मीले नै राजधानीको मु’टुमा रहेको अस्पतालमा उपचार न’पाउनु र डाक्टरबाट दुव्र्’यवहार हुनुले यतिबेला उनको मन कुँ’डिएको छ।